Xisbiga Netflix, ku raaxayso waxyaabaha aad ka hesho asxaabtaada | War gadget
Xisbiga Netflix, ku raaxayso waxyaabaha aad ka hesho asxaabtaada
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Aplicaciones
Kama joojinayno maalmahan inaan helno siyaabo 'kala duwan' oo karantiil ah guriga sababtoo ah COVID 19. Codsiyada noocyadooda kala duwan. Jimicsiga guriga, ku nasashada guriga, ku barashada guriga. Qaar badan xulashooyinka karantiil si ay noogu marto habka ugu caajis yar. Laakiin waxa ku saabsan Netflix?
Waxaan u qaadaneynaa in qof walba uu u maleynayo taas Netflix marwalba way jiri doontaa, iyo in soo jeedimaha intiisa kale ay jiraan marka aan ka dharagno daawashada taxanaha ama filimada. Laakiin sidoo kale waa run in Netflix ay tahay wax aan ilaa hada ku raaxeysan karin asxaabta anagoo aan isku qol wada joogin.
Xisbiga Netflix, waligaa kaligaa ma noqon doontid daawashada taxanahaaga
«Codsigan», kaas ma abuuray Netflix laftiisa, sameeyaa waad la wadaagi kartaa qofka aad rabto filim ama cutub kasta si isku mid ah Tan macnaheedu waa taas dhammaan kuwa iska diiwaangeliya xisbigan Netflix waxay bilaabi doonaan daawashada taxanaha la doortay isla waqtigaas qof kasta oo gurigiisa jooga.
Iyo waxa ka dhigaya xitaa isdhexgal iyo khaas ah waa taas waxaad yeelan doontaa sheeko la heli karo si aad toos uga faallooto wax kasta oo aad arkayso. Sheeko dooneysa kaligaa ha dareemin daawashada filim ama taxane ah. Cidna wax ha ka dhiibato ama Weydiinta faahfaahin kasta oo ka socota filimka waajibaadka waa wax aad had iyo jeer jeceshahay.
Nasiib darro Xisbiga Netflix maahan codsi sidan oo kale ah (ugu yaraan hadda), markaa ha u cararin si aad uga hesho Google Play Store. Si aan ugu adeegsanno annaga, iyo dhammaan kuwa aan dooneyno inaan la wadaagno taranka taxanaha aan ugu jecel nahay, waa inaan ku rakibnaa qalab ka mid ah biraawsarka Google Chrome.
Way ka fududdahay sida ay umuuqato, kaliya soo dejiso qalabka wax lagu xidho oo cinwaankiisu aanu ku dhejino dhamaadka boostada. Markii aan rakibnay kaliya waa inaan gujineynaa astaanta Xisbiga ee Netflix si aan u abuurno mid kuu gaar ah «xisbi Netflix». Si asxaabtaadu ugu soo biiraan, waxaad si fudud ku qasbanaan doontaa inaad wadaagto URL-ka qof walboo doonayaana wuu ku biiri doonaa. Taasi miyaanay ahayn fikrad wanaagsan oo aad ku dareemi karto u dhawaanshaha kuwa aad tabayso?
Xisbiga Netflix hadda waa Teleparty
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Xisbiga Netflix, ku raaxayso waxyaabaha aad ka hesho asxaabtaada
Ciyaaraha bilaashka ah ee ugufiican ee lagu qarash gareeyo # StayInHome ee loogu talagalay COVID-19